Tsy fantatra ny anton`ny fitokonana hatreto. Ireo mpanao gazety tonga teny an-toerana dia narirarian`ny tompon’andraikitra ka tsy afaka miresaka tamin’ny talen-tsekoly. Ireo mpampianatra indray raha nanontaniana dia nisafidy nangina izy ireo. Nanontaniana raha nisy teritery dia tsy namaly mihitsy. Marihana fa ao anatin`ny telo volana faharoan`ny ivon`ny fampianarana isika izao kanefa dia misedra olana indray ny fampianarana. Raha tsiahivina, ireo mpampianatra mivondrona ao anatin`ny PASEM ihany koa dia nanome 72 ora ny minisiteran`ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana ara-teknika noho ny tsy fahaloavana ilay ambiny tambin-karama 50 000 ariary. Raha ny zava-mitranga eo amin`ny lafiny fanabeazana aloha dia mitotongana ny lentan`ny fampianarana ka mila vahaolana haingana sy maharitra.